Author Topic: Sidee baan u hagaajin karaa caafimaadkayga xagga maskaxda? (Read 20985 times)
« on: March 17, 2008, 06:18:55 PM »
Dadka laga faa'iidaysto, ama sida xun loola tacaamulo, badanaa way ku adag tahay inay doodaan. Waxa laga yaabaa inay door bidaan inay dhibka iska qarsadaan, markaas laakiin caray la buuxsami karaan, taasoo keenaysa deganaan la'aan iyo isku buuqsanaan. Tabobar lagu qaato dhiirranaanta waxay wanaajin kartaa kartida arrimahan oo kale.
aragnay. Isku cabburinta dareenka iyo qiirooyinkaaga waxay keeni kartaa daal dhalin kara degganaan la'aan iyo isku buuqsanaan.
Ra'yi xaqiiqo ah
Buug-yarahani waxuu xoogga saaray aragtiyo hadda aad looga tix geliyo meelo ay ka mid yihiin Yurub iyo Maraykanka. Waddamo iyo caadooyin kale, kuwaasoo diintu ay muhiim tahay sida arrinta loo qaabilo aad bay sidan uga duwanaan kartaa. Waxa niyadda sii dejin lahaa in la helo xaqiiqooyin la isku wada raacsan yahay oo ku saabsan xanuunnada madaxa. Maadaama aynaan hayn, waxay dantu nagu kaliftaa inaan nafteenna uun ka fekerno, annakoo muujinayna khibradahayaga, dhegaysanaynana kuwa kale kuna qaabilayna araa'dooda maskax furan.
Mind waa hay'ad khayri ah oo diiwaan gashan Lam. 219830
Hadii aad qabtid su'aal ku saabsan mawduucaan halkaank u weydii
Views: 22434 April 29, 2016, 09:52:03 PM
Views: 10290 January 06, 2012, 10:02:19 PM
Views: 12754 December 08, 2012, 08:59:58 PM
Views: 63687 April 08, 2011, 09:07:47 PM
Views: 7490 February 15, 2016, 05:22:18 PM